श्रीमानलाई मन लागे जतिबेला पनि श्रीमतीले चाहिँ कुर्नुपर्ने !
एउटै घरका लोग्ने स्वास्नी लोग्ने राती अवेर आएर सजिलै भन्छ यार साथीहरु थिए आउनै दिएनन् त्यो समय श्रीमानले यो बुझ्दैनन् कि साथी त बुढीका नि छन् उ पनि यो समय सम्म बाहिर बसेर आईभने मेरो मनले के ठान्छ ? कतियप बिबाहित पुरुषका साथीहरुले घर छिटो जाने केटालाई जोईटिङ्ग्रे नि भन्दा रहेछन् । यहि डरले श्रीमतीलाई भन्दा बढि समय साथीभाईलाई दिने गरेको पाईन्छ ।
पुरुष स्वाभिमान भनेको आफ्नी स्वास्नी संग नझुक्नु हो र ? श्रीमतीको महत्वलाई प्रेम गरेर सकेजति माया र साथ दिनेहरु पो पुरुष । एउटी नारीको मनमा बस्न पाउनुनै पुरुषको ठुलो भाग्य हो, उसले जति प्रेम दिन्छ श्रीमतीले बदलामा उसलाई लाखौं गुणा बढि माया गर्न सक्छे । किनकी स्वभावैले नारी कोमल हुन्छन् । सबै पुरुषले आफ्ना श्रीमतीलाई यसरी माया गरिदीउँ की कहिल्यै श्रीमतीको मन र कानुनी दायरामा आफु बलत्कारीका रुपमा उभिनु नपरोस् ।
एउटा नागरिक अनागरिक बनिरहँदा मैले केही गर्न सकिनँ, आईएम सरी श्रेया !
‘पृथ्वीनारायणलाई सराप्ने नेता अनैतिक मानिस हुन’ डा. युवराज संग्रौला
रबि लामिछाने मेरो पनि हौसलाकर्ता र आदर्श हुन: दिल निसानी मगर